China PE-RT orinasa mpamokatra fantsona rano mafana sy mangatsiaka sy mpanamboatra | Shengyang
Ny fitoniana hafanana tsara sy ny fanoherana ny hafanana maharitra
Ny fantsona dia manana homogeneity tsara sy fampisehoana marin-toerana. Ny fampiharana amin'ny rafitra rano mafana dia afaka manome antoka ny fampiasana 50 taona.
Fahombiazan'ny fanodinana tsara sy kalitao miorina
Ny fantsom-pe-RT dia tsy mila mandalo ny dingam-pifandraisana, tsy mila mifehy ny diplaoma mifampitohy sy ny fitoviana, vitsy ny rohy famokarana, homogeneous ny vokatra, ary milamina sy azo antoka ny kalitao. Malalaka sy mora ampiharina
Azo aforitra sy hiondrika, miaraka amina boribory kely (Rmin = 5D), ary tsy hihemotra. Ny fihenjanana amin'ny ampahany miondrika dia azo alaina haingana, misoroka ny fahasimban'ny fantsom-pohy amin'ny fihoarana noho ny fifantohan'ny fihenjanana mandritra ny fampiasana. Fananganana amin'ny tontolo iainana ambany ny mari-pana, tsy mila manafana mialoha ny fantsona, manangana mety, mampihena ny vidiny.
Fiatrehana fiantraikany tsara sy fiarovana azo antoka
Ny mari-pana maripana ambany mari-pana dia mety hahatratra 70 ° C, izay azo entina sy hatsangana amin'ny toerana iva maripana; ny fahafahany miaritra ny fiantraikany ivelany dia avo lavitra noho ny fantsona hafa hisorohana ny fahasimban'ny rafitra ateraky ny fanamboarana misavoritaka.
Tsy misy fandotoana ny tontolo iainana mandritra ny famokarana, ny fananganana ary ny fampiasana. Ny fako dia azo averina alamina ary an'ny vokatra maitso.
Fitondrana hafanana tsara
Ny fitaritana mafana dia 0.40W / mk, mety amin'ny fantsom-panafana ny gorodona.
Fifandraisana mafana miempo, mora amboarina
Fifandraisana mahamay, PE-RT dia tsara lavitra noho ny PEX amin'ny fomba fifandraisana sy ny fanamboarana.